Nwoke awakpo nwata nwaanyi afọ iri na isii n’Ogun | odumblog
Nwoke awakpo nwata nwaanyi afọ iri na isii n’Ogun
posted on Jul. 01, 2019 at 9:46 pm July 1, 2019
A ka na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ, ọzọ achiri ụkwụ abụo wụnye. Achọpụtara na otu nwoke dị afọ iri atọ nke a na-akpọ Segun Olawoyin dinara nwagbọghọ dị afọ iri na isii mgbe nne na nna nwata a gara ụlọ ụka n’Ogun Steeti.
Ihe a mere na Fraide bụ ụbọchị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Juun na Mapara Makogi nke dị na Obafemi-Owode Lokal Gọọment, n’Ogun Steeti. Ndi uwe ojii kwupụtara nke a na Sonde, ụbọchị iri atọ nke ọnwa Juun.
A chọpụtara na nwoke mere mpụ a bụ enyi ezinaụlọ nke nwata nwaanyị. Ọ bịara n’ụlọ nwata jụọ ese nne na nna ya; mgbe ọ chọpụtara na ha anọghị, ọ bakwuru nwata nwanyị n’ike.
N’ịchọ ụzọ ọ ga-esi zọpụta onwe ya, nwata nwanyi takasịrị nwoke a arụ n’ahụ.
Nwoke a bụ Segun gwara ndi uwe ojii na ọ maghị ihe bara ya n’ime mere o jiri kpaa ụdị agwa a. Ndi uwe ojii akpọrọla ya gawa ngalaba Anti-Human Trafficking and Child Labour ebe a ga-eme nchọcha ma nye ya ntaramahụhụ ruru ya.
Onuorah Jennifer July 1, 2019
O nweghi ihere dị na mmeri a: Rohr
Tanker fuel egbuola ọtụtụ mmadu na Benue
Odum Blog2 days ago